गाउँ बने बन्छ देश- विचार - कान्तिपुर समाचार
गाउँ बने बन्छ देश
विज्ञान र प्रविधिको बलमा निर्मम तरिकाले प्रकृतिमाथि विजय गर्दा के जितेछौं त ? एउटा जाबो सूक्ष्म कीटबाट भाग्दै हिँड्नुपर्ने !
वैशाख २५, २०७७ रामचन्द्र पौडेल
सबैको अन्तिम शरण आफ्नै थलो । पशुपक्षी दिनभरि चारतिर भौँतारिए पनि साँझ आखिर आफ्नै बास फर्कन्छन् । दुनियाँभरि फिँजिन पुगेका नेपालीहरू पनि अहिले कोरोना महामारीका कारण आफ्नै देश फर्कंदै छन् । त्यसमा पनि सहरबजार हैन, आफ्नै गाउँ । आफ्नै थातथलो सुरक्षित ठान्दै, मुन्टो लुकाउने ठाउँ खोज्दै गाउँघरतिरै हान्निँदै छन् । आमाकै छातीमा मुन्टो घुसार्न पुग्ने बालकजस्तै ।
अंग्रेजीमा एउटा शब्दावली छ— ‘ब्लेसिङ इन डिसगाइज’ । अर्थात्, हाम्रै उखान ‘लात्तले हानेको कुकुर टाँडमाथि’ भनेझैं । अथवा, ‘काठ काट्ता अक्षर परे’ जस्तै या ‘कहाँ पोखियो ? भागमा’ भनेजस्तै, घन्चमन्च र कोलाहलपूर्ण सहरबजारबाट अहिले मानिस गाउँतिर ओइरिँदै छन् । यो एक किसिमले हाम्रा लागि वरदान साबित पनि हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण ठूला सहर, अग्ला घर, खचाखच मान्छे, औद्योगिक सभ्यता, मोटरकारहरूको ठेलमठेल र आधुनिक विकासको चकाचौँधबाट सुरु भयो । विकसित युरोप र अमेरिका, नवविकसित मध्यपूर्व हुँदै यो भारतको औद्योगिक र आर्थिक राजधानी बम्बई र दिल्लीसम्म अत्यधिक फैलिएको छ । मान्छे सुरक्षा खोज्न गाउँतिर भाग्दै छन् । अरू महामारी पछौटेपन, अविकास र गरिबी व्याप्त रहेका ठाउँहरूमा फैलने गर्थे । नेपालमा हैजाले सबभन्दा बढी कर्णालीतिर हाहाकार मच्चाउँथ्यो । अहिले त्यसको उल्टो भएको छ ।
विश्वभरि तहल्का मच्चाइरहेको कोरोनाको सामु मै हुँ भन्ने शक्तिहरू निरीह देखिएका छन् । विश्वशक्ति अमेरिका नै लाचार देखिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको त्यत्रो उन्नति हायलकायल बनेको छ, किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेको छ । म सम्झन्छु कवि तथा नाटककार बालकृष्ण समको यो उद्गार— ज्ञान मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ । यही क्रममा म सम्झन्छु महर्षि वेदव्यासलाई, जसको दर्शनले भन्छ— मानिसको बढ्दो आकांक्षा र उर्लंदो महत्त्वाकांक्षालाई बेलाबेला तालु नै झन्कने गरी ठेस लाग्ने गर्छ । पृथ्वीमा सन्तुलन कायम गर्न कुनै न कुनै अवतार अवतीर्ण हुन्छ । महत्त्वाकांक्षी दण्डित हुन्छ । भर्खर दूरदर्शनमा भारतीय राष्ट्रपतिको उक्ति देखें— ‘कोरोनाको कारक हो अति आबादी ।’ र, अहिले पश्चिमाहरूले ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ पनि अघि ल्याएका छन् ।
भन्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, यतिखेर मैले विद्यार्थी छँदा पढेको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थसको ‘अप्टिमम थ्यौरी अफ पपुलेसन’ पनि सम्झिरहेको छु— जनसंख्या चुलिएपछि स्रोत–साधन बराबरीमा आउँछ । यता, महात्मा गान्धीको चर्खा र खादी आन्दोलनलाई सम्झँदै, ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ का लेखक शुमाकरले भनेका कुराहरूतर्फ पनि मेरो ध्यान गइरहेको छ, ‘पृथ्वीसँग मानिसको आवश्यकता पूर्ति गर्ने जति पनि क्षमता छ, तर मानिसको लालचलाई पूर्ति गर्ने कत्ति पनि क्षमता छैन ।’ त्यो लालच र महत्त्वाकांक्षामा भौँतारिँदै आज मानिस कोरोना प्रकरणसम्म आइपुगेको छ ।
त्यसैले हामीले एकपल्ट सुस्ताएर, एकपल्ट गम खाएर अहिलेसम्मको दौडधुपतिर फर्केर हेर्ने हो कि ? विज्ञान र प्रविधिको बलमा अविचारित र निर्मम तरिकाले प्रकृतिमाथि विजय गर्दा के जितेछौं त ? कहाँ पुगिएछ त ? सोच्ने हो कि ! एउटा जाबो सूक्ष्म कीट कोरोनाबाट भाग्दै हिँड्नुपर्ने, लुक्तै बस्नुपर्ने र आखिर गएर आफ्नै कुनाकन्दरा गाउँठाउँ खोज्दै प्रकृतिकै काखमा मुन्टो घुसारेर सुरक्षित अनुभव गर्नुपर्ने !
सहर सुरक्षित छैनन् । यहाँ प्रदूषित वायुले पृथ्वीको सुरक्षाकवच ओजोनको भित्तो छेड्दै छ । त्यसैले अहिले सुरक्षाको खोजीमा गाउँ फर्केका नागरिकहरूलाई गाउँमै सुरक्षित बस्न दिऔं । तर कोरोना महामारीबाट सुरक्षित हुँदै गर्दा तिनले भोकमरीबाट चाहिँ असुरक्षित हुन नपरोस् ! त्यसको पनि प्रबन्ध गरौं । हाम्रो धरतीसँग हाम्रो भोकको आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रशस्त क्षमता छ । हामीलाई सुख र आनन्द दिने क्षमता पनि छ । त्यसको विकास गर्ने योजना ल्याऔं । रोजगारीको खोजमा सम्पत्तिशाली मुलुकतिर गएका नेपाली पनि त्यहाँबाट फर्काइएका छन् र प्राय: सबै गाउँतिरै गइरहेका छन् । गाउँमै फर्केका छन् । सुनसान बन्दै गएका गाउँहरू पुन: गुलजार बन्दै छन् । अब यी मानिसलाई गाउँमै थाम्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
गाउँ फर्केका जनतालाई गाउँमै थाम्न किन पनि आवश्यक छ भने, सहरहरूमा बढी जनघनत्वले सहरी जीवनलाई नारकीय र हिँड्नै असम्भव बनाएको छ । अस्वस्थकर बनाएको छ । वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । काठमाडौंजस्ता सहरको जनसंख्या नघटाईकन भएकै छैन । नत्र सास फेर्नै गाह्रो हुँदै छ । अब यहाँ केहीले पनि पुग्दैन । पानी लगायतको आपूर्तिसमेत असम्भव हुँदै जानेछ ।
रोजगारीको खोजमा बाहिरिएका नेपाली गाउँघर फर्किरहेका छन्। सुनसान गाउँहरू पुन: गुलजार बन्दै छन्। अब यो जनशक्तिलाई गाउँमै थाम्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
उता गाउँ रित्तिएकाले उर्वर जमिन बाँझै छन् । सबैतिर झाडी बनिसक्यो । मानिसको कमीले गर्दा गाउँमा बाघ, भालु र बाँदरहरूको रजाइँ चलेको छ । सबैतिर सन्तुलन हराउँदै गएको छ । कृषि उब्जनी कसले गर्ने ? विदेशबाट रोकियो भने के खाने ? त्यसकारण गाउँ पुगेको जनसंख्यालाई गाउँमै स्थापित गर्ने योजना र कार्यक्रम बन्नुपर्छ । त्यति राम्रो हावापानी, सुन्दर र स्वच्छ बसाइ हुँदाहुँदै गाउँ मानिसले सुखसुविधाको खोजीमा छाडेका थिए । हिजो गाउँसम्म पूर्वाधार पुगेको थिएन । आज बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पुगे पनि गाउँ रित्तिइरहेका छन् । अब यही मौका हो, हिजो पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई उपयोगमा ल्याउने पनि ।
यसका लागि केही कुरा सोचिहाल्नु, केही कुरा गरिहाल्नु आवश्यक छ । मुख्य कुरा बुझौं— गाउँबाट मान्छे हिजो किन भागेका हुन् ? गाउँमा कुनै सुविधा थिएन । हुँदाहुँदा गाउँमा सुरक्षा भएन । माओवादीका कारण पनि धेरै गाउँघरको घरजम छाडेर हिँडे । अब आज गाउँमा सुरक्षा पनि छ । गाउँमा सबै आधुनिक पूर्वाधार पनि पुगेका छन् । पुगेका छैनन् त केवल रोजगारी, आम्दानीको स्रोत, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा, बस्ती विकास तथा सुधार । गाउँमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहनको अभाव छ । ‘ग्रामीण जीवन नै मर्यादित र सुखी जीवन हुन सक्छ, गाउँकै स्वच्छ र स्वस्थ हावापानीमा दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ’ भन्ने चेतनाको अभाव छ । र, यी सबैभन्दा प्रमुख कुरा, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभाव छ ।
गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको स्थिति सिर्जना गर्न अहिले हाम्रो हातमा रहेको पहिलो कुरा हो— कृषि क्रान्ति । कृषि क्रान्तिलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि औजार, गुणस्तरीय बीउबिजन र मल अनि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र ऋण सुविधा । अनि मध्यस्थको शोषणबाट उन्मुक्ति, सहकारीको राम्रो प्रबन्ध, सुरक्षाका लागि कृषि बिमा र पशु बिमाको सुविधा तथा शीतभण्डारहरूको प्रबन्ध, सब ठाउँमा व्यवस्थित बजारको प्रबन्ध । यति भएपछि किसानले आफूलाई चाहिने अन्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, अण्डा मात्र उत्पादन गर्दैनन्, स्वदेश र विदेशका बजारलाई आपूर्ति पनि गर्नेछन् । नयाँनयाँ खोज र अनुसन्धान गरेर समुद्रपारिसम्मै पुर्‍याउन सकिने उच्च मूल्य पाउने कम तौलका वस्तु उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी लिन पनि सक्छन् । यसैले कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई प्रभावकारी बनाऔं ।
कृषि क्रान्तिका लागि राज्यले छिटै कानुन तर्जुमा गरेर आफ्नो जमिन नहुने नागरिकले पनि जमिन प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीमध्ये भूमि बैंकको व्यवस्था अति सहज र सरल हुन सक्छ । गाउँभरि त्यसै रहिरहेका जमिन सरकारले भाडामा लिने, अनि कसले कति जमिनमा काम गर्न चाहन्छ, सुपथ मूल्यमै लामै समयका लागि भाडामा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निश्चित नियम बनाई सरकारी पर्ती जमिनहरूसमेत निश्चित वर्षका लागि भाडामा कमाइखान दिन सकिन्छ । वनको राष्ट्रिय उपयोग नीतिअन्तर्गत ‘लिजहोल्ड फरेस्ट्री’ को व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा गाउँका आम्दानी र रोजगारीको अर्को आधार हो— ग्रामीण पर्यटन । कोरोना व्याधिका कारण तत्काल यसमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । तैपनि तत्काललाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै भविष्यमा यसलाई पुन: आम्दानीको ठूलो आधार बनाउन सकिन्छ । पर्यटन पूर्वाधार खडा गर्ने कुरामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै लाग्नुपर्‍यो । हाम्रा नदीनाला, त्यहाँबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्, साना जलविद्युत् अन्य महत्त्वपूर्ण आम्दानीका स्रोत हुन् ।
त्यस्तै, आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू, कृषिजन्य र वनजन्य उद्योग, खनिज उद्योग तथा ससाना लघु उद्योग, औषधि उद्योग, हस्तकलाका निर्यातयोग्य सामग्री उत्पादन आदि अनेक उद्योग–व्यवसायलाई गाउँ–गाउँमै पुर्‍याउन सकिन्छ । रोजगारी दिन सकिने असंख्य क्षेत्र छन् हाम्रो प्रकृतिमा । आवश्यकता छ, शिल्पकला तालिम र अभिमुखीकरणको ।
अर्कातर्फ, राज्यका अहिलेसम्म निर्माण र स्थापना भएका संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । गाउँ–नगरपालिका, सहकारी र सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रभावकारी अनुगमनका साथ क्रियाशील बनाउनुपर्छ । अहिले गाउँ फर्केको जनसंख्यालाई गाउँमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, गाउँमै थमौती गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति त्यतै उन्मुख गराऔं । शासनमा बस्नेले संकीर्ण सोच त्यागेर देश सबैको हो भन्ने सोची सबैलाई यथोचित सहभागी गराएर एउटा महान् राष्ट्रिय अभियान अघि बढाऔं । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिऔं । रोग र भोकको सामना गरौं । प्रकृतितिर फर्कौं । प्रकृतिसँग मिलौं र प्रकृतिसँगै तालमा ताल मिलाएर सुखी र सुरक्षित जीवन प्राप्त गरौं । श्रमको सम्मान गरौं, उद्यमशील बनौं । गाउँ बनाऔं, गाउँ–गाउँमै बसौं । जय नेपाल !
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०९:२५
भविष्य सुनिश्चित गर्न कृषि क्रान्ति
कृषि रोजगारीको आधार बन्न नसकेकैले गाउाहरु बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकास पूर्वाधार पुगे पनि रित्तिादै गएका छन्
वैशाख ७, २०७७ रामचन्द्र पौडेल
अहिले हामीसामु दुइटा चुनौती खडा छन् । महामारी र भोलि आउने भोकमरी । कोभिड-१९ को सामना गर्न सारा स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
विद्यमान औषधि विज्ञानबाट मानिसलाई बचाउन र रोग निदानका लागि खोपहरूको आविष्कार गर्नपट्टि वैज्ञानिकहरू लागिरहने नै छन् ।
हामीले भोलि हुन सक्ने भोकमरीको समाधान पनि बेलैमा खोजिराख्नु जरुरी भैसकेको छ । भोकमरी किन जटिल बन्दै छ भने, यहाँको कृषिउपज यसै पनि हामीलाई अपर्याप्त छँदै छ, त्यसमाथि बाहिरबाट खाने मुख लाखौंको संख्यामा थपिने र खाद्यपदार्थ आउन रोकिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।
यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नका लागि हामीले आफ्नै अवस्थिति, आफ्नै प्रकृति र आफ्नै कौशलमा भर पर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले आफ्नै माटो, आफ्नै हावापानी, आफ्नै वनजंगल र नदीनालामा आधारित हुने कृषि क्रान्ति सुरु गरिहाल्नुपर्छ । कृषि क्रान्ति भन्नेबित्तिकै परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट छलाङ मारेर अन्य आवश्यकताको पूर्ति गर्ने आकर्षक नयाँ कृषि प्रणाली बुझ्नुपर्छ ।
यहाँबाट पलायन हुन खुट्टा उचालिरहेकालाई मात्र होइन, विदेशबाट फर्किन बाध्य गरिएका जनशक्तिलाई पनि सहजै स्वीकार्य हुने, जाँगर पैदा हुने पेसाका रूपमा प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्नु नै कृषि क्रान्ति हो ।
एकातिर श्रम शक्तिको अभावमा हाम्रा गाउँघरका जमिनहरू अनुत्पादक बनेर यसै बाँझिइरहेका छन् भने, अर्कातर्फ बेरोजगारी र भोकमरी हामीसामु खडा छ । विगतमा हामीले सबैजसो गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता विकासका पूर्वाधार पुर्‍यायौं । गाउँ भने विकासका सबै पूर्वाधार पुग्दापुग्दै रित्ता, खाली, बस्तीविहीन र मानिसविहीन भैरहेका छन् । यो विडम्बना किन भयो भने, गाउँमा सबै कुरा पुगेर पनि आमदानी र रोजगारीको कमी नै रह्यो ।
कृषि रोजगारीको आधार बन्न सकेन । यस्तो विडम्बनाको अविलम्ब अन्त गर्न नयाँ कृषि प्रणाली र नयाँ औजार, नयाँ प्रविधि र नयाँ तौरतरिका, श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत अवलम्बन गरेर आधुनिक, यान्त्रीकृत र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकै अग्रसरतामा सुरु हुनुपर्छ । कृषिजन्य साना-ठूला उद्योगसहितको नयाँ कृषि प्रणाली !
हामीले के याद राख्नुपर्छ भने, दुनियाँको आजको औद्योगिक विकास युरोपेली कृषि उन्नतिको जगमा भएको हो । हामीले पनि आधुनिक कृषि प्रणालीका माध्यमले नेपालका सबै मैदान, पाखापखेरा, हिमाल र कन्दरालाई उत्पादनशील उपयोगमा ल्याएर कृषि क्रान्ति गरी औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नु छ ।
हाम्रो देशको समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जा शक्तिको विकास हो । नेपालीलाई रोजगारी र आम्दानी दिने हाम्रा मौलिक क्षेत्र पनि यिनै हुन् ।
तर आज कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले पर्यटन विस्तारमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ र ऊर्जा शक्तिको विकास पनि धर्मराएको छ । यस्तो स्थितिमा घुमीफिरी कृषि नै अहिलेको विकासको मूल आधार र भोलि आइपर्ने भोकमरीबाट जनता बचाउने एक मात्र आधारका रूपमा रहेको छ ।
कृषि उन्नतिका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेका छौं । सबैतिर कृषिउपज र कृषि सामग्री ढुवानी गर्न सडकहरू पुगिसकेका छन् । अब जुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङका स्याउ बोटमै सडेर जाने अवस्था छैन । दुर्गमभन्दा दुर्गम गाउँका किसानले उत्पादन गर्ने फर्सी, काँक्रा, घिरौंला, गोलभेंडा, सागसब्जी र फलफूल बजार पुर्‍याउनलाई समस्या छैन ।
जताततै बिजुली र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्यचौकीहरू पुगेका छन् । अहिले हिजोजस्तो ‘फलफूल र तरकारी उब्जाएर के गर्ने, घैया-कोदो भए त छाक टर्छ’ भन्ने अवस्था छैन । जाँगर हुनेलाई आफ्नै घरआँगनमा आम्दानी छ । कृषि क्रान्तिका लागि पृष्ठभूमि तयार छ ।
नेपालमा यसअघि पनि व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम, बीसवर्षे कृषि विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रमहरू नआएका हैनन् । तर तिनको कार्यान्वयन पनि आधामनले भयो र योजना पनि सर्वांग थिएनन् । कतिपय अल्पायुमै बेवारिसे बने; कतिपय भ्रष्टाचार, पक्षपात, कमिसनतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमै रुमलिए । अब कुनै पनि ढिलासुस्ती र लापरबाहीको छुट हामीलाई छैन । समग्र प्याकेज प्रोग्रामका साथ अगाडि बढ्ने मौका यही हो ।
विगतमा कतिपय नीतिगत गल्ती पनि भएका छन् । औद्योगिक विश्वबाट आयातित विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा ‘माउ गए घमाउँदै, पाडा गए रमाउँदै’ भनेजस्तो हामी पनि रमायौं । गर्दै आएको कृषि प्रसार ठप्प र कृषि अनुसन्धान अलपत्र पार्‍यौं; कृषि सामग्री संस्थानलाई घाँडो मान्यौं; कृषि औजार कारखाना ठाँडो बन्यो ।
संविधानले नै किटान गरेको समाजवाद-उन्मुख राज्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी’ तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा राज्य त्यसरी पन्छिन हुँदैनथ्यो । अब त झन् विश्व परिघटनासमेतले र हाम्रा बाध्यात्मक आवश्यकताले गर्दा पनि राज्य त्यसरी पन्छिन र उदासीन हुन पाउँदैन । संविधानअनुसारकै नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारी अपरिहार्य छ । त्यसैले तत्काल चालिहाल्नुपर्ने केही कदम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
कृषि क्रान्तिका आधार
१.कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई एउटै छानामुनि ल्याएर समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गर्ने ।
२.देशका कृषिविद्हरूलाई आवश्यक प्रेरणासमेत दिएर दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति किसानको खेत र किसानको माझ पुर्‍याउने ।
३.कृषकवर्गलाई आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषि प्रविधिमा दक्ष बनाउन र अभ्यास गराउन अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण र तालिमको व्यापक अभियान निरन्तर चलाइरहने ।
४.कृषिकर्मलाई सजिलो, छिटो र जाँगरिलो बनाउन भौगोलिक अवस्थाअनुकूलका आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने । भारत, चीन, जापान वा इजरायल जहाँबाट हुन्छ कृषि औजार र कृषि प्रविधि भित्र्याउन ढिलो नगर्ने ।
५.उपयुक्त कृषिमल (प्रांगारिक समेत), बीउ-बिजन र कीटनाशक सुलभ गराउने ।
६.दाना उद्योग खोल्न लगाई सहुलियत दरमा पशुआहार उपलब्ध गराउने ।
७.सिँचाइका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने ।
८.भूमिहीन किसानलाई समेत खेती गर्नका लागि भाडामा
जमिन उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको कानुनी र आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
९.कृषि उत्पादन र कृषिबजार (मध्यस्थको शोषणबाट मुक्तिका लागि) सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१०.कृषि बिमाको व्यवस्था गरी यसलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गर्ने ।
११.कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय प्रबर्धन गर्न सरकारले सहयोग र प्रेरणा दिने ।
१२.वनको राष्ट्रिय उपयोग नीतिअन्तर्गत कृषिवन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१३.कृषिऋणको सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै सहुलियतपूर्ण बनाउने ।
१४.जडीबुटी खेती र जडीबुटी प्रशोधन कार्य सशक्त रूपले अघि बढाई हिमाली जडीबुटीसमेत सदुपयोग गर्न औषधि उद्योगमा जोड दिने ।
१५.कृषि सामग्री संस्थान, कृषि औजार कारखानाजस्ता कृषि क्रान्तिमा सहायक संस्थानहरू सरकारले नै व्यवस्थापन सुधारको अठोटका साथ अघि बढाउने ।
१६.कृषि क्रान्तिका साथसाथै ग्रामीण बस्तीहरूको सुधारको अभियान पनि जरुरी छ । असुरक्षित र अस्वस्थ बस्तीका कारण पहाड र तराईका असंख्य कृषकहरू अकालमा मर्नुपर्ने र घरबारविहीनसमेत हुनुपर्ने स्थिति छ । भीरपाखाहरूमा पहिरोले पुरिएर, समथर तराईमा डुबानमा परेर, हावा-हुरी र आगलागी अनि शीतलहर, लु र अनेक महामारीको सिकार बन्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न बस्तीहरूको व्यवस्थित प्रबन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
अब हामी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्दै गर्दा आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा ‘कमभन्दा कम शासन’ को सिद्धान्तमा संशोधन र परिमार्जन गरेर जनजीविकाका सवालमा राज्य उदासीन रहने हैन, जनहित र सुरक्षाका लागि केही निश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ । कृषिक्रान्ति सफल पार्न होस् वा सहकारी प्रभावकारी बनाउन वा कृषिजन्य उद्योग वा तालिम-प्रशिक्षणजस्ता सबै विषयमा, कठोर अनुगमन र अनुशासन कायम हुनैपर्छ ।
यस प्रसंगमा सबभन्दा बढी आवश्यक छ- सुशासन । पक्षपात, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रबाट मुक्त प्रशासन । राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नचलाई केही ठोस आर्थिक-सामाजिक नियममा समाज चल्नैपर्छ । स्वशासनसँगै स्व-अनुशासनको अभ्यासतर्फ समाज र राष्ट्रलाई उन्मुख गराउनैपर्छ । अब यो अर्को प्रण गरौं, संकल्प गरौं-
१.नेपालको कुनै पनि कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनेछैन ।
२.नेपालको कुनै पनि भूमि असिञ्चित रहनेछैन ।
३.नेपालको कुनै पनि हिमाल, कुनै पनि नदी अनुपयोगी रहनेछैन ।
४.नेपालको कुनै पनि वनजंगल अनुत्पादक रहनेछैन ।
५.हाम्रा कुनै पनि हातगोडा काम नगरी बस्नेछैनन् ।
अन्तमा, यो बन्दाबन्दीलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरौं । ज्यादै नअतालिऔं । तर, सचेत, सजग र संयमित भएर कोरोना महामारीको सामना गरौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्झिऔं, होसियारीपूर्वक व्यवहार पनि चलाउँदै जाऔं ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०८:००